Hailemariam oo Netanyahu kala hadlay arrimaha Somalia (Maxaa kamid ah) | Arrimaha Bulshada
Home News Hailemariam oo Netanyahu kala hadlay arrimaha Somalia (Maxaa kamid ah)
Hailemariam oo Netanyahu kala hadlay arrimaha Somalia (Maxaa kamid ah)
Tuesday, June 06, 2017 News Edit
Bulsha:- Waxaa magaalada Tel Aviv ee dalka Israel booqasho afar cisho ah ku jooga Ra’isul wasaaraha dalka Ethiopia Hailemariam Desalegn.
Hailemariam, ayaa halka kulan hordhac ah kula qaatay Ra’isul wasaaraha dalka Israel, oo ay kawada hadleen xiriirka labada dal, arrimaha Somalia iyo Ganacsiga Africa.
Hailemariam, oo ku hormaray xiriirka kala dhexeeya Israel ayaa sheegay in dowladiisa ay ku taameyso inay laba jibaarto xiriirka diblumaasiyadeed iyo kan Ganacsi ee kala dhexeeya Israel.
Hailemariam, waxa uu dhigiisa Israel, Benjamin Netanyahu ka dalbaday in dhankooda ay ka xoojiyaan xiriirka waxa uuna ku faanay in Ethiopia ay xiligaani tahay ilbaabka laga galayo xiriirka Afrika-Israel.
Waxa ay isla soo hadalqadeen xaaladaha ka jira Somalia, waxa uuna Ra’isul wasaaraha Ethiopia ugu baaqay dhigiisa inay dib u furaan albaabka xiriirka Israel iyo Somalia.
Waxa uu Hailemariam sheegay inay muhiim tahay in Israel ay xiriir la sameyso Somalia, si ay uga caawiso dhinacyada Amniga, Dhaqaalaha iyo Horumarka.
Ra’isul wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu, ayaa soo dhaweeyay soo jeedinta dhigiisa waxa uuna ballanqaaday inay isku dayayaan inay la xiriiran Somalia, waxa uuna aad uga mahadceliyay talaabooyinka dhanka horumarka ah oo ay qaadeyso Ethiopia.
Hailemariam ayaa lagu wadaa inuu la kulmo Madaxweynaha Israa’iil, Reuven Rivin oo uu kala hadli doono xiriirka Ethiopia iyo Somalia.
Dhinaca kale, Hailemariam ayaa dadaal dheer ugu jira sida dowlada Ethiopi ay uga dhex muuqan laheyd dowladaha kale ee Africa dhinacyada Ganacsiga, Siyaasada iyo Dhaqaalaha.